Anna waa I kan: Koox cusub oo ku soo biirtay kooxaha bulshada gaaleeya! – Maandoon
Maalintii Axadda ee darraad ahayd, waxaa isku mar dalka Masar iyo Soomaaliya looga dhawaaqay urur diineed loo bixiyey “Kuwa aan xaqa la gabban/الصادعون بالحق”. Ururkaas oo xaruntiisa dhexe ay tahay dalka Masar waxaa ku midoobay wadaaddo u kala dhashay waddamo kala duwan, sida Masar, Soomaaliya, Liibiya iyo Kuweyt.
Bayaankii laga akhriyey munaasabadihii looga dhawaaqay ururka waxaa lagu xusay aragtida iyo fikirka ururku ku shaqayn doono timaaddada, waxaana lagu sheegay in aasaasayaasha ururku ay tan iyo sannadkii 1973 si hoose u la socdeen xaaladaha ka taagan dunida loogu yeero dunida Islaamka- waa sida ay hadalka u dhigeene- ayna ka xanuunsadeen “waxa ay ku arkaan, kana maqlaan dunida oo dhan, iyo waxa ay ku dambaysey xaaladda muslimiintu ee is-khilaaf, hoog, burbur akhlaaqeed, dib-u-dhac, saboolnimo, halaag iyo in cid kasta oo cidaa ay hoog hor leh ku hoggaamiso”, ummadda muslimka ahna waxay ugu baaqeen in ay dib ugu dhawaaqaan in ay ku noqdeen diinta islaamka.
Sida laga dheehan karo erayada bayaanka, kooxdaani waa mid si guud u gaalaysiinaysa ummadda Islaamka ah, uguna baaqaysa in ay riddada ka toobad keenaan oo hadda iyo kow ay diinta soo galaan. Intaa bayaanku wuxuu ku daray in ururku uusan doonayn in uu gacan ka hadal adeegsado, laakiin sida laga akhrisan karo isla bayaanka ka tegidda gacan ka hadalku ma aha mabda’a si joogto ah ururku ugu dhaqmayo, balse waa mid ku kooban marxaladda ururku hadda ku sugan yahay ee awood yarida ah, laakiin timaaddada haddii ururku tabaraysto kama aysan reebbana in uu awood adeegsado oo jihaad ku dhawaaqo. Waxayna la tahay in ururku hadda ku jiro marxalad la mid ah marxaladdii nebiga (SCW) iyo saxaabadu (RC) iyaga oo aan tabar lahayn ay magaalada Maka ku sugnaayeen, waxayna quuddaraynayaan in ay gaaraan marxalad la mid ah tii Madiino ee Nebiga iyo saxaabadu ay bilaabeen in ay jihaad qaadaan. Bayaanka ururka waxaa lagu caddeeyey in ururku uusan rumaysnayn dimoqoraadiyad, baarlamaan iyo xisbiyo, fikradahaasina ay yihiin kuwo daaquudku (=الطاغوت) ku qaato xaqii Alle keligii u lahaa in uu wax xukumo, sharci dejiyo, wax xalaaleeyo, waxna xaareemeeyo.
Dhab ahaantii, ururkaani ma aha mid cusub, laakiin waa urur muddo dheer jirey balse hadda la doonayo in dib boorka laga jafo, sidaa awgeedna magac cusub loo bixiyey. Ururka hadda loo bixiyey “Kuwa aan xaqa la gabban/الصادعون بالحق”, horay waxaa loogu yaqiin magaca “Kooxda Gaalaynta iyo socdaalka/جماعة التكفير والهجرة”, waana urur asal ahaan bartamihii lixdamaadkii qarnigii hore ka curtay xabsiyada dalka Masar ka dib markii ay isku dhaceen xukuumaddii Masar ee uu madaxda ka ahaa Jamaal Cabdinaasir iyo ururka Ikhwaanu Muslimiinku, dabadeedna xubnihii ururkaas si xun loogu ciqaabay xabsiyada dalkaas. Arrinkaas oo dhaliyey in qaar ka mid ah dadkii xabsiyadaas lagu ciqaabay ay shaki geliyeen islaamnimada madaxda Masar, kuwa dunida Islaamka iyo guud ahaan Muslimiinta. Tan iyo bilowgii toddobaatanaadkii qarnigii la soo dhaafayna ururka iyo afkaartiisu waxay ku faafeen meelo badan oo dunida ah, oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Faafidda afkaartaanna waxaa gacan ka geystey qoraalladii Sayid Qudbi iyo Abuu Aclaa Al-Mowduudi ee ku dhisnaa xaakimiyada iyo jaahilnimada bulshada (Waxaa xusid mudan in buugga Sayid Qudub ee “Macaalim fii Tariiq/معالم في الطريق/Milestones” uu safka hore uga jiro buugta dhallinyarada Muslimku ay toddobaatanaadkii sida weyn u akhrin jireen, welina taageerayaasha ururkaani ay akhristaan).
Magaca cusub ee ururka loo bixiyeyna wuxuu muujinayaa in ururka ka baxay marxaladdii qarsoodi ku shaqaynta, oo hadda ka dib uu fikirkiisa fagaarayaasha ka jeedin doono, sida in uu adeegsado qalabka warbaahinta sida haddaba mar hore muuqata.
Sababta keentay in ururkaan oo muddo dheer si qarsoodi ah u shaqaynayey maanta la shaaciyo waa arrin la fahmi karo, waxayna tahay iyada oo hoggaamiyeyaasha ururku ay dareemeen in ururku uu dabargo’ qarka u saaran yahay, sida qura ee uu ku sii jiri karaana ay tahay in ururka dhiig cusub lagu shubo, sida dhiig cusub loogu shubi karaana ay tahay in dadweynaha la isu sheego (sida laga dheehan karo sawirka xubnaha ururka ku dhawaaqay, waxaa la rumaysan yahay in xubnaha ururku ku abtirsadaa ay ka kooban yihiin facii soddon sano ka hor ururka ku biiray, oo badankoodu hadda da’dii hawlgabka gaaray ama qarka u saaran).
Runtii waa ayaandarro in ragga ururkaan ku dhawaaqay aysan waayaha wax ka baran, oo kontan sano ka dib fikirkoodu uu weli halkiisii taagan yahay, ayna hadda doonayaan in ay dhallinyarada u laqinaa sidii ay bulshada ku gaalaysiin lahaayeen. Duqowdu ma garan waayeen in muslimiintu aysan maanta u baahnayn Daacish iyo Al-Shabaab carcartoodii qaba.
Halkaan ka daawo munaasabadihii ururkaan looga dhawaaqay iyaga oo Carabi iyo Soomaali ah.
← Nacayb Diin Ma Aha!
Diinta Eebbaa leh, dalkana waa wadaagnaa! →
Wahaabiyada, Riyaalka Sucuudiga iyo Siyaasadda Maraykanka
May 21, 2017 Mohamed Adaani 0